တားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ဂျပန်စာလေ့လာကြည့်ရအောင် – YANGON STYLE
တားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ဖတ်ပြီး ဂျပန်စာလေ့လာကြည့်ရအောင်
တိုကျိုကို ၂လပိုင်းတုန်းက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရောက်ဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာမို့လို့ အရာရာက အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်။ အဲ့ထဲကမှ ပျော်စရာကောင်းတာက ကိုယ်နဲ့လုံးဝမသိတဲ့ ဂျပန်လိုမျိုးတွေကို စကားသွားပြောကြည့်ရတာရယ်၊ သတိပေးတားမြစ်ချက်ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ရတာတွေပါ။ အဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြန်shareပေးချင်လို့ ဒီစာလေးရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဟနဲဒကိုသွားတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘေးဘီကို စပ်စုကြည့်တော့ ကိုယ့်နောက်ခုံက ဂျပန် အမျိုးသမီးကြီး၂ဉီးကို သတိထားမိတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ နဲနဲကြာတော့ အပေါ့အပါးသွားချင်လာတယ်။ Toiletနေရာကို ပုံလေးတွေနဲ့ညွှန်ပြထားပေမဲ့ အကြောင်းရှာပြီး စကားပြောကြည့်ချင်တာလေ။😁
နောက်ဘက်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ အဖွားအရွယ်ဂျပန်အမျိုးသမီးကြီးက စာအုပ်လေးဖတ်နေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ すみません。トイレはどこですか လို့ မေးကြည့်လိုက်တယ်။ သူတချက်ကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်။ ခတခနအသံထွက်မပီလို့ နားမလည်ဘူးထင်တာနဲ့ お手洗い（おてあらい）はどこですか。လို့　ခပ်သွက်သွက်လေးပြောင်းမေးလိုက်တယ်။ သူသဘောပေါက်သွားပြီး　လမ်းညွှန်ပေးတယ်။ သူပြန်ပြောတာ N4 Kotaba တွေချည်းပဲမို့ နားလည်လွယ်တယ်။ နောက်တော့ သူကပဲစကားစပြောတယ်။ အဆင်ပြေလား။ သမီးပြောတဲ့စကားကို နားမလည်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က ဂျပန်လိုပြောလိုက်တော့ အံအားသင့်သွားလို့ပါ။ လို့ ပြန်ပြောပြရှာတယ်။
သူ့စကားသွားပြောကြည့်ချင်လို့ ခိုးကြည့်မိတော့၊ သူကလည်းပြန်ကြည့်နေတယ်။ သူကလေယာဉ်စီးတဲ့ ၆နာရီလုံး စာအုပ်ကြီးပဲဖတ်နေလို့ စကားသွားမပြောကြည့်လိုက်ရ။ 😅
လေယာဉ်ဆင်းခါနီး တန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာ ဂျပန်စကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်၊ နားလည်နေတာပဲနော်။ သင်ထားတာလား။ တဲ့ မေးလာတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင်တာ၃နှစ်ကျော်ပါပြီ။ လို့ ပြန်ဖြေတော့။ ကြိုးစားသင်ဖို့၊ ဂျပန်စာမှ မဟုတ်ဘူး။ လေ့လာစရာတွေမှ အများကြီးရှိလို့ ကြိုးစားဖို့ အားပေးစကားပြောရှာတယ်။ 😍
Immigration ဖြတ်တော့လဲ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းက 日本語分かる လို့ မေးလို့ ခပ်တည်တည်ပဲ ဂျပန်လိုပဲ သူမေးတာတွေကိုဖြေခဲ့လိုက်တယ်။ 😅 သူနားလည်မလည်တော့မသိ။ ဂျပန်နိုင်ငံထဲ ခြေချခွင့်တော့ရခဲ့တယ်။
စနေ့နေ့ညဘက်ကြီးရောက်တယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ရုံးတက်စရာမလိုသေးတော့ လျောက်လည်တယ်။ နေရာတိုင်းမှာ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်၊ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်၊ တားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်တွေ မြင်နေရတယ်။ တစ်ခုမှမလွတ်အောင် လိုက်ဖတ်တယ်။ နားမလည်တဲ့ခန်းဂျီးပါရင် ပြန်ရှာကြည့်လို့ရအောင် ဓာတ်ပုံပါရိုက်ခဲ့တယ်။ အခုအဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်shareပေးဖို့ အခွင့်အရေးလေးရလာတယ်။
အဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေထဲကမှ 禁止(きんし)(kin shi)(တားမြစ်ချက်၊ တားမြစ်ခြင်း)နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကို အရင်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ JLPT စာမေးပွဲတွေမှာလဲ မေးလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံးလေးတွေမို့လို့ N5, N4, N3 levelတွေ အကုန် ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။
ta chi i ri kin shi
（はいってはいけません）လို့ ပြောတာပါ။ ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးက စက်ဘီးတွေရပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကို မဝင်စေချင်တဲ့အခါမှာလည်း အဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ချိတ်ထားလေ့ရှိတယ်။
do zo ku kin shi
NO SHOES (Shoes Strictly Prohibited)
ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကလည်း public area တစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် သူပြထားတဲ့အတိုင်း နင်းလျောက်သွားရုံပါပဲ။　スタート(start)　ဆိုတဲ့ နေရာကနေ စနင်းသွားရမှာပေါ့။ ခြေဗလာနဲ့ နင်းလျောက်သွားရမှာပါ။ မြန်မာမှာ အုန်းမုန့်ခွက်နင်းသလိုမျိုးပေါ့နော်။ နင်းကြည့်ပေမဲ့ အရမ်းအေးတဲ့ အချိန်မို့ ခြေထောက်နာလို့ အဆုံးထိ မလျောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။
chuu rin kin shi
လူသွားလမ်းဘေးမှာနေရာလွတ်လေးလဲရှိနေတော့ စက်ဘီးလာရပ်ကြလို့လားမသိ။ စက်ဘီးမရပ်ရလို့ ရေးထားတယ်။ အဲ့နေရာလေးမှာ ဆာကူရပန်းလေးတွေပွင့်နေတာတွေ့လို့ စက်ဘီးမရပ်ပေမဲ့ မက်တက်ရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်မှသိတာက အဲ့ဒါဆာကူရမဟုတ် うめ(အုမဲ)တဲ့။ ဆာကူရလိုပဲလှတယ်။ ဆာကူရမပွင့်ခင် うめအရင်ပွင့်တာတဲ့။
to o ri nu ke kin shi
ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကတော့ private areaတွေမှာ တာဝန်ရှိသူ၊ အဲ့နေရာကို ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိသူတွေကိုပဲ ဝင်ခွင့်ပေးတာမျိုးလို့ထင်တယ်။ မြန်မာမှာဆို ကားလမ်းတွေကျပ်ရင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတို့ထဲက ပတ်ပြီးကားမောင်းတတ်ကြလို့ မဝင်ရ၊ ကားဖြတ်မမောင်းရ လို့ ဆိုင်းဖြုတ်လေးတွေ တပ်ထားတာကိုတောင် သတိရမိသွားတယ်။
you ji no hi to ri no ri kin shi
be bi- ka-. ka- to kin shi
No single ride for infants
ကလေးငယ်များ တစ်ယောက်ထဲ မစီးရ။
ဒါကစက်လှေခါးမှာ ခလေးငယ်လေးတွေကို အုပ်ထိမ်းသူမပါပဲ တစ်ယောက်ထဲ စီးခွင့်မပြုတာပါ။ လက်တွန်းလှည်းတွေကိုလည်း ခွင့်မပြုပါလို့ ရေးထားတာပါ။
a bu nai! wa ta ru na!
Danger: Do not cross here!!
ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးမှာ (禁止)ဆိုတဲ့ စာလုံးမပါပေမဲ့ တားမြစ်တာပါပဲ။ အဲ့နေရာကနေလမ်းကူးရင်း accident ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့လို့ စာကပ်ပြီးသတိပေးထားပုံပဲ။ ဂျပန်မှာ ကားတွေက ဖြေးဖြေးပဲမောင်းပြီး လမ်းကူးသူကိုဦးစားပေးတယ်။ ရပ်ကွက်လမ်းမှာဆို လမ်းလျောက်နေသူရှိရင် အဲ့လူကိုဦးစားပေးပြီး ကားကိုရပ်ပေးတာကိုတောင်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလိုထင်ပြီး ကိုယ်ကလဲဘေးကပ်ရပ်၊ ကားကလဲကိုယ့်ကိုဘေးကပ်ရပ်ပေးနေလို့ အဲ့တုန်းက တော်တော်ရီချင်သွားတယ်။
အခြားshareပေးချင်တာလေးတွေ ဆက်ရေးချင်တာလေးတွေတော့ ရှိသေးတယ်။ သိချင်တာလေးတွေရှိရင် commentမှာ မေးလို့ရပါတယ်။ အမှားပါရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါ။